Fitbit chọrọ ka ị rahụ ụra nke ọma site na nkwalite ọhụrụ na ngwa ya | Androidsis
Mgbaaka ọrụ nwere ọrụ a kapịrị ọnụ maka ihe bụ nlebara anya na mmega ahụ anyị niile. Ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu ahụ, enwere ọtụtụ, dị ka Xiaomi Mi Band 2, nke nwekwara ụfọdụ ọrụ pụrụ iche iji tụọ oge anyị na-ehi ụra. Ihe mmetụta ndị ahụ na-edekọ naanị mgbe anyị banyere ụra ụra.
Ihe ohuru nke ngwa ngwa Fitbit nke anakpo Sra leepra na-etinye uche na oge gi take na-eburu ụra zuo ike nke ogologo ụbọchị ma si otú ahụ hụ na awa ndị ahụ ga-abụ nke kachasị mma iji teta n'ụdị kachasị mma n'ụtụtụ. Mmelite na-adọrọ mmasị maka ndị nwere ụdị nke a ụdị, na ewezuga ịdekọ usoro ị na-eme n'ụbọchị, ga-ama ma ị hiri ụra nke ọma n'abalị ụnyaahụ.
1 Detuo oge ụra gị
2 Mana kedụ ihe ngwa Fitbit na-enye?
Detuo oge ụra gị
Ihi ezigbo ụra abalị bara ezigbo uru, ọtụtụ ndị nwekwara ike ile ya anya dị ka igbu oge. Na mba anyị, anyị nwere nnukwu nsọpụrụ maka oge ụra ndị ahụ na ụra nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị gaara echepụta ibupụ na mba ndị ọzọ n'ihi etu o nwere ike isi bịa dinara ala ruo minit 10 ruo 15. Ọ bụghịzi ihe amamihe dị na ya, ọ bụ ezie na anyị amaraworị na mgbe ụfọdụ ịchọrọ itinye oge gị na sofa na oge awa nke oge ọkọchị mgbe ọ na-ekpo ọkụ mana ọ dị mma.
Maka ndị ọkachamara ahụike ahụike oge a nke abalị dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ebumnuche, mana otu n'ime ha bụ n'ihi ahụ "na-edozi onwe ya" a makwaara na a na-eji awa ndị a alụ ọgụ maka ụdị ọrịa dị iche iche, melite ọrụ nke ụbụrụ anyị na ọbụnadị ibu ibu.
Ka anyi kwuo na ebe a ka ngwa Fitbit si abata na mmelite ohuru nke ga-elebara anya tụọ aro ma chetara gị n'ihi na mgbe ị na-eteta ma ọ bụ mgbe ị na-elegharakarị ezigbo ahụike anya. Nwere ike ịhụ eserese nke akụkọ ntolite gị iji nyochaa otu ị si ehi ụra n'izu ndị gara aga.
Niile njirimara ndị a maka nhazi data sitere na ngwa ma bụrụ Ndokwa Ihi ụra o Oge ihi ụra oge niile maka ndị ọrụ niile nwere mgbaaka Fitbit nwere nsuso ụra. Nke a gụnyere Fitbit Surge, Fitbit Blaze, Fitbit Charge HR, Fitbit Alta, Fitbit Charge, Fitbit Flex, na Fitbit One Ihe niile ị ga - eme bụ imelite ngwa ahụ na gam akporo.
Mana kedụ ihe ngwa Fitbit na-enye?
Ọ bụrụ na ịnweghị mgbaaka ọrụ Fitbit na ihe ekwuru ugbu a bụ ịmata, ị kwesịrị ịma na emebere ngwa ahụ iji rụọ ọrụ na wearable. Ọrụ ya bụ na nọ n'ọrụ, rie nke ọma, chịkwaa ibu gị ma hie ụra nke ọma. N'ime afọ ole na ole ebe ọtụtụ ndị na-akwụsị ịse anwụrụ ma họrọ ịmalite ibi ndụ ahụike, a na-atụ aro mgbaaka dị ka nke a, ma ọ bụrụ na ya na ngwa dị elu na-esonyere ya, ọ ga-aka mma.
Ngwa ahụ na-ejikọ eriri na Fitbit Surge, Charge HR, Charge, FLex, Otu ma ọ bụ Zip wearable na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụ ọrụ maka ịdekọ ihe mgbaru ọsọ gị kwa ụbọchị na ọganihu maka oge maka ihe ndị bụ usoro, anya, calorie ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na - eji GPS iji dekọọ ije gị ma na - agba ọsọ, ọbụnadị nwere ike ịlele ọrụ ndị dị ka Yoga na mgbatị ahụ.
Dị ka ego, kwa na-ahụ maka iwere ndekọ nri ị na-eri ịmara kalori ole ị na-eri kwa ụbọchị ka ị nwee ike idekọ ibu gị. Ngwa Fitbit na-enye nhọrọ iji zoo ndị enyi gị kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu iji tụlee ọnụ ọgụgụ.
Ngwa na-adọrọ mmasị enwere ike ịgbakwunye na nke ahụ ndepụta nke ngwa ise maka ịgba ọsọ y kwụsị ụda anụ ahụ na m kesara 4 izu gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Fitbit na-ewebata ngwa ọrụ ọhụrụ iji nyere gị aka ịrahụ ụra nke ọma